Ogaden News Agency (ONA) – Sheekh Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane ) oo Siminaar siiyay xubnaha Jaaliyada South Africa “JOKA”
Hogaanka Arimaha bulshada & Abaabulka Jabhadda wadaniga xoreynta Ogadeniya ONLF Halgame Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin ‘’Diirane’’ayaa Siminaar siiyay Xubnaha Jaaliyada Ogadeniya ee faraca magaalada Cape Town wadanka South Africa
Siminaarkan waxaa lagu qabtay xafiiska Faraca jaaliyada Ogadenia ee koonfur Africa magaalada Cape Town gaar ahaan xaafada Bellville. Siminaarkan oo qaatay muddo saacado ah ayaa waxaa kafaaiidaystay xubno farabadan oo isagakala yimid nawaaxiga magaalada Cape Town.
Siminaarkan oo kusaabsanaa maamulka iyo hogaaminta tayaynta & kor u qaadida aqoonta xubnaha ayay siweyn xubno farabadani uga soo qayb galeen islamarkaana ka faa iidaysteen Cashiradii loo fidiyay taas oo waxbadan kabadali doona wacyigooda. Casharadan ayaa ku aadan Maamulka toolmoon iyo qaabka wax loo hoggaamiyo.
Madaxa Arimaha bulshada & Abaabulka jabhadda ONLF mudane Shiekh Maxamed Cabdi Yaasin ayaa waayadan ku sugan wadanka Koonfur Afrika isaga oo u jooga hawlo kormeer. Hoggaanku waxa uu si joogto ah ula kulmaaya bulshada ku dhaqan wadanka South Africa islamarkaana la yeelanaaya shirar waa weyn & kulamo gooni gooni ah, ku waas oo dhamaan tood ku saabsan Kor u sii qaadida hawlaha Halganka & midaynta shacabka Soomaalida Ogadeniya, Shirarkan iyo kulamadan aya wali ka sii socda wadankan south Afrika ee Hoggaanku ku suganyahay.
Xafiiska ONA South Africa
long love jwxo says:
maan shaa allah wuu da daalayaa shekh dhiirane illahey hanooso dadjiyo xornimo khayr qabta